Imbwa Sunga Vagadziri & Vanopa | China Imbwa Sunga Fekitori
Yedu yakasununguka uye inofema nylon mesh imbwa sunga inogadzirwa neyakagwinya uye isina huremu zvinhu.Iyo inobvumira yako pup kuti iende pane idzo dzinonyanya kudikanwa kufamba pasina ivo vanopisa.
Iyo inogadziriswa uye inokurumidza-kuburitsa mapurasitiki mabhureki uye D-mhete yekubatanidza iyo inosanganisirwa leash.
Iyi nylon mesh imbwa inosunga ine hombe dzakasiyana dzakasiyana saizi uye mavara. Inokodzera kune ese marudzi embwa.
Imbwa yako painodhonza, iyo tambo yekusungira imbwa inoshandisa zvinyoro kumanikidza pachipfuva nepafudzi mashizha kuti aendese imbwa yako kudivi uye aise pfungwa yake pauri.
Tsika yekusunga imbwa inozorora yakadzika pachipfuva panzvimbo pehuro kubvisa kudzipwa, kukosora, uye kusunga muromo.
Tsika tambo ye imbwa inogadzirwa neinyoro asi yakasimba nylon, uye inokurumidza kubhururuka mabhureki ari pamabhande emudumbu, zviri nyore kuisa uye kudzima.
Iyi tsika yakasungwa kune imbwa inoodza imbwa kubva pakudhonza pa leash, inoita kuti kufamba kunakidze uye kushushikana-kusununguka iwe iwe nembwa yako.
Imbwa Kutsigira Simudza Sunga
Imbwa yedu yekutsigira inosimudza simbi ndeyemhando yepamusoro yezvinhu, iri nyoro kwazvo, inofema, iri nyore kusuka uye inokurumidza kuoma.
Iyo imbwa inotsigira kusimudza harness inobatsira zvakanyanya kana imbwa yako ichikwira nekudzika masitepisi, ichipinda mukati nekubuda mumotokari uye mamwe akawanda mamiriro. Izvo zvakanaka kune imbwa dzine kuchembera, kukuvara kana kushomeka kufamba.
Iyi imbwa inotsigira yekusimudza simbi iri nyore kupfeka. hapana kudikanwa kwematanho akawandisa, ingoshandisa yakafarikana & hombe Velcro kuvharwa kutora / kudzima.
Inoratidzira Hapana Dhonza Imbwa Sunga
Iyi hapana dhonza imbwa inosunga ine tepi inoratidzira, inoita kuti chipfuyo chako chionekwe kumotokari uye chinobatsira kudzivirira tsaona.
Tambo dzinogadzikika zviri nyore uye machira ane mativi maviri anochengetedza bhurugwa iri munzvimbo irimo kubvisa chaffing uye kuramba kupfeka nguo dzekudzivirira.
Iyo inoratidzira hapana yekudhonza imbwa sunga inogadzirwa yemhando yepamusoro nylon oxford inofema uye yakagadzikana. Saka iri yakachengeteka kwazvo, yakasimba uye yakashongedzwa.